ရန်ကုန်မြို့မှ သားသားမီးမီးတို့အတွက်Baby Spa များ – YANGON STYLE
ရန်ကုန်မြို့မှ သားသားမီးမီးတို့အတွက်Baby Spa များ
ကျန်းမာရေးအသိပညာတွေနဲ့ စောင့်ရှောင့်မှုတွေ တိုးမြှင့်လာတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ မိဘတိုင်းက သားသမီးများအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးသော အကောင်းဆုံးသော နည်းမှန်လမ်းမှန်များနဲ့သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်လိုကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် Mommy ချယ်ရီကသားသားမီးမီးတို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ Baby Spa များ ကို မီးမီး Clover အတွက် ရှာဖွေစုစည်းရင်း ပြောပြပေးထားပါတယ်။
ခုတစ်ခါ ညွှန်းပေးချင်တာလေးကတော့ Baby Swimming&Oil Massage လေးတွေရမယ့် Baby Spa လေးတွေ ကို ဖော်ပြရင်း ဒီနေရာလေးတွေကက ရနိုင်တဲ့ Service လေး နဲ့ Link လေးတွေရောကိုပါ Benefitလေးတွေနဲ့ တွဲဖက် ဖော်ပြ ပေးသွားပါမယ်နော်
သူကတော့ baby လေးတွေပါလုပ်ပေးရင်း မေမေတွေပါ ဇိမ်ခံစောင့်နေလို့ရပါတယ် ။ ဖေဖေတွေကတော့ ထိုင် စောင့်ပေါ့။ကလေးကိုင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင် နူးညံ့တဲ့အတွက် နာမည်ရတဲ့ spa လေးပါရှင်
သူ့မှာ ဆိုရင်…Baby လေးတွေအတွက် ဆို
Baby Spa & Oil Massage
Baby Hair Cut Service
မေမေတွေ အတွက် ဆိုရင်…
Prenatal(ကိုယ်ဝန်ဆောင် အနှိပ်ကုထုံး) & Postnatal (မီးဖွားပြိး နို့တိုက်မိခင် အတွက် အနှိပ်ကုထုံး) Massage Therapy ….ဆိုပြီး ရှိပါတယ်ရှင် ။
Address: No.24 .Level-1.6.5 miles Market Place. Hlaing Township. Yangon.
09-7777 00 307
ဒုတိယ တစ်ခုက…ကြည်မြင်တိုင် က
We Care Nursery Centre ပါ
သူကျတော့ မေမေတွေအတွက် service မရှိပေမယ့် ထူးခြားတာလေးက ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနာပြု ဆရာမများဦးစီးဖွင့်တဲ့ Nursery Centre လေးနဲ့ Baby Spa တွဲ ဖွင့် ထားတာပါရှင်
Baby Nursery Centre(6mth to 3yrs)
အဲ့က Nursery centre လေးကို Clover အတွက် တစ်ခါ စုံစမ်းဖူးတာ စျေးလဲ သင့်တင့်ပီး အချိန်လဲ adjust လုပ်ပေးလို့ အဆင်ပြေပါတယ် ။ ခုက spa နဲ့ ပတ်သတ်တာလေး ပြောတာဆိုတော့ နောက်တခေါက်ကျရင် Nursery Centre လေးအကြောင်း မျှဝေပေးပါမယ်နော် ။
Address:အမှတ် ၇၈၊ မြေညီထပ်၊ အုန်းပင်လမ်း (အထက်)၊ ကြည်မြင်တိုင် မြို့နယ် ။
(ကြည်မြင်တိုင် ဘူတာ နှင့် ညစျေး အနီး)
09-764 75 75 64, 09- 964 75 75 64
Babies’ Barber Spa
သူကတော့ လုံးဝ Baby လေးတွေ နဲ့ မေမေ အတွက် Luxury Service အစုံ ရတဲ့ နေရာလို့တော့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ရနိုင်တဲ့ Services လေးတွေကလဲ ဟိုးပိစိလေးကနေ ကလေးကြီးလေးတွေ အထိ ရတယ်. အလှကြိုက်တဲ့ မီးမီးလေးတွေနဲ့ တကယ့် အကိုက်ပါပဲ .
Kids Choco Spa in Jacuzzi
Baby Spa(swimming+oil massage)+Hair cut
Kids Body Spa(scrub/oil massage exfoliate /mask)
Body Spa(scrub/oil massage/sauna/mask)
Ice Therapy Hair Treatment
Botox All in One Hair Treatment
Waxing(Half leg+Underarm )(Brazilian)
Manicure+Pedicure (with Cool Spa Treatment )
Hand paraffin wax+Manicure
Foot paraffin wax+Pedicure
Ph: 09765342588 , 09783943644 , 0943182028
Baby Spa သွားမယ်ဆို ဘာလေးတွေ ပြင်ဆင်သွားရမလဲ?
– ရေကူးပြီး ရေသုတ်မို့ ဘေဘီလေး ရဲ့ တဘက် ၊ အကျီ ။
– ဒိုက်ဘာ ၊ ဒိုက်ဘာ ခရင်မ် ။
– တချို့ ဘေဘီလေးတွေက ကိုယ်သွားတဲ့ဆီက နှိပ်တဲ့ အဆီနဲ့ တည့်နိုင်ပေမယ့် အချို့ကျ မတည့်တာမျ်ုး ရှိတဲ့အတွက် အရင် Spa ကို ဖုန်းဆက် ပြီး အမျိုးအစား အရင်မေးကြည့်နော် မတည့်ရင် နှိပ်နေကျ အဆီလေး ယူသွားပေးလို့ရအောင်ပါရှင် ။
– သုံးနေကျ Lotion.
– ဘေဘီလေးတွေက ရေချိူး ပြီး ဗိုက်ဆာတက်တဲ့အတွက် နို့ဗူး ၊ စားနေကျ မုန့်တခုခု လဲ ယူသွားကြမို့ မမေ့နဲ့ အုံးနော်.
Benefits for Swimming တွေက
Hydrotheraphy or Water Therapy
ကလေးငယ်လေးတွေကို ရေကူးဂွင်းလေး လည်ပင်းမှာ စွပ်ပြီး ရေထဲ ချပေးထားတဲ့အတွက် သူတို့ ရဲ့ လက်အားလေးတွေ သုံးပြီး ကူးခက်ရတာမို့ ရေလှိုင်းရဲ့ အထိအတွေကို ပထမ အချက်နေနဲ့ ခံစားမိစေပြီး wave pressure ကရင်ဘတ်လေးကို ရိုက်ခက်စေတဲ့အတွက် အဆုတ်အားလဲကောင်းစေပါတယ် ၊ သွေးလည်ပတ်မှုလဲ ကောင်းစေပါတယ်ရှင်။ လက်လေး ခြေလေးတွေ ခက်ပီး ကူးနေရတဲ့အတွက် ခြေလက်လေးတွေလဲ ပိုသန်မာလာစေနိုင်ပါတယ် ။ Finland နိူင်ငံ ရဲ့ Research အရဆို အဲ့လို Swimming လုပ်ပေးတဲ့ ကလေးတွေက မလုပ်တဲ့ ကလေးတွေထက် ပိုပြီး လမ်းလျောက်တာ မြန်တာမျိုး လဲ တွေ့ရပါတယ်တဲ့.။ အဲ့လိုမျိုး ဆိုင်မသွားအားရင်တောင် တပတ် တခါ လောက် အိမ်မှာရှိတဲ့ လေထိုး ရေကန်လေးဖြစ်ဖြစ် ဇလုံလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူးခတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ လေးတွေ အလွန်ပျော်မှာပါ။ ထူးခြားတာလေးက အစားစာချင်စိတ်လေးတွေ ပိုဖြစ်လာမယ် ၊ အိပ်စက်ချိန်မှာလဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စေတာလေးတွေ တွေ့ရမှာပါရှင် ။ Motor Skill. Social Skill. Cognitive Skill လေးတွေလဲ တိုးတက်လာကြောင်း ကို ဂျာမနီကလဲ လေ့လာမှုအရ တွေ့ရှိရပါသေးတယ်ရှင် ။
Benefits for Baby Massage တွေကတော့
နုနယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ နှိပ်နယ်ပေးတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ ရှင် ။ သူရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကလဲ တကယ် အံ့မခန်းပါပဲနော်
ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်လဲ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ် ။ baby massage က ကလေးငယ်ကို relax ဖြစ်စေတဲ့အတွက် အငိုလျော့နည်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်စေခြင်း ပြီး အိပ်နေချိန်မှာ အလန့်တကြား ပြန်နိုးစေမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ် ။ ပုံမှန်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လဲ Oxytocin ဟိုမှုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကို နှိုးဆွပေးသလို ဖြစ်တဲ့အတွက် မေမေ နဲ့ ကလေးငယ်ကြား ပျော်ရွှင်မှုတွေ ချစ်ခြင်းတွေလဲ တိုးလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ။
By : Little Clover